ReyisMiyikrooFaayinaansiinliqaa diijitaalaa kennuu jalqabuuf ta’u isaa beeksisee - ዜና ከምንጩ
ReyisMiyikrooFaayinaansiinliqaa diijitaalaa kennuu jalqabuuf ta’u isaa beeksisee
ReyiisMayikrooFaayinaansii itti gaafatamanii isaa murtaa’e karaa ‘’SahayiPeyii’’liqiiDijitaalaafiToramarsariitiinbittaafgurgurtaa raawwachuu hojii irra akka oolchuu beeksiiseera.
ReyiisMayikroo Faayinansiitiin kan badhaadheakkataan hojii bittaaf gurgurtaa ittinraawwatamuu danda’u SahayiPeyiijadhamuuSumaaleefinaannolee ollaa kanneenbirraattidabalatee amma daangaa biyya ollaa Keenyaattisi’ainaan guddachaa jira.
Tooftaaliqaaittinkennaniif bittaaf gurgurtaa ittiin raawwatan kun biyyaalee ollaa kessumaa Keeniyaan irraa muuxannoon fudhatame kan badhaadhee ta’u hojii raawwachiisaanSahayiPeyifii miseensi hundeessaaMayikroo Faayinaansii ReyiisAbddulAziiz Hassan ibsaniiru.
SahaayPeyiidhiyeenyattis qajeelfama Islaamummaa seerawwan Shariyahojii irra kan oolchantajaajilaliqaaModarabahojiirra akka oolchuu Addis Maaladaaf ibsaniiru.
Dhaabbatichi bu’urasaa kan taasifteenaannooSomaaleetti ta’u isaatiin maamiltoonni dhaabbatichaa hordoftoota amantaa islaamaa ijaa ta’an qajeelfama Islaamummaa kan hordofe akkaataa Kenninsaliqii diijitaalaa kennuudhaaf kan socho’u amentaanliqiichaas kan murtaa’u akkaataa qusannaamamiilaatiin ta’u akka danda’u AbddulAziiz Hasan Addis Maaladaatti himaniiru.
Bittaaf gurgurtaan kun ‘’SmaartKiyoosk’’ akka dabalatufii hawaasni naannichaa meeshaa barbaadu yoo dhabe amma Finfinneetti dhufuudhaaf yaroo itti fixuufiiadeemsa dabalataa hir’isuuf yaadamee kan hojjatame ta’uun ibsameera.
Akkaataabittaaf gurgurtaa kana haala kanaan dura hin mullanentajaajilaliqaa waliin walitti hiinee warren qoodaniifii ajaja gessaniifdhiyeenyattitajaajila kennuudhaaf qophaa’e jiraachuu Abdul Aziz ibsaniiru.
Geetuu Miliyoon damee baankii diijitaalaa waggaa 12 ol baankiwwan garaa garaatti kan hojjete yammu ta’u rakkoon walfakkaataa as magaalaa keenya Finfinneetti kan hubatamudha.Filmaatawwan kaffaltii bayyachaa kan jiran ta’us fayyadamtonni garu xiqqaadha jachuudhaan Addis Maaladaaf yaada kennaniiru.
KubbaaniiyaanReyiisPeyii waliin hojjetu sekoondii tokkotti gigabayitii 1 kessummeesuu kan dandeessisusarvarii mataa isaa qaba kan jedhamee yammu ta’u networkii 2G fii 3G iidhaanhojjechuu kan danda’an akkaataa hojii Andiroyidiifii IOS akkasumas USSDHR iin fayyadamtoota akaakuu bilbilaa hundaaf mijataa ta’e kan qophaa’eedha.
Bu’uraaleen misoomaa Faayinaansiirakkoo tokko yoo ta’es garaa garummaan beekumsagidduu isaanii jiru garu dameen kun akka hin foyyofne kessumaa magaalatti akka sababiin tokkotti jadhaniiru. Baankiwwanis ta’an waaleettonni akkasumas filmaatawwan biraa homisha isaanii hojii irra oolchuun dura hubanna cimsuu irratti yoo hojjetan bu’an gaariin nidhufa jedhaniiru.
DabalataanisMootummaanis xiyyeeffannaa kenne ittiinhojjechuuf damee jajjabeessuufi qabuudha. Mahaalalqni gara tora diijitaalaatti yammu galu mootummaan baasii maallaqqamaxxansuuf baasuu niihiriisa. Dabalataanis bittaaf gurgurtaa seeraan alaa to’aachudhaafdandeessisaamantaan jedhus jira.
Torbee darbees waldaan aksiyonaaReyiimayikroofaayinaansii akkaataa hojii baankii Awaasha dameewwan 460 qabu waliin walitti hidhaman ifatti kan eebbisiise yammu ta’u walitti hidhama isaanii kanaan namni SahaayiPeyifayyadamu kamuu bakka ATMiinBaankii Awaash jiruu hundaati Kaardii malee maallaqa baasii taasiisuuf haala itti danda’u uuma.
Haala walfakkaatuun mammilliherrega baankii Awaash qabu iddoo kamittuu kessumaa naannolee baadiyaatajaajila baankii argachuun hin danda’amnetti bakka bu’an Sahaayii jirutti maallaqanaannefachuu haala ittiin danda’u baankii Awaashfaana akka hundeessanAbdulAziiz ibsaniiru.
Bu’a birrii biliyoonna 2 oliif herrega kuufama mamillabiliyoonna 76 ol kan qabu BaankiinAwaash Gara fulduratti naannolee Baankiin hin qaqqabnnetti kessumaa Harargee Bahaafii magaaloota Oromiyaa tokko tokkotti maamiltoota fayyadamtoota SiihayihorachuudhaafKaroorri qabamuu itti gaafatamaan damee hojii diijitaalaa maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan eeraniiru.
Sehaayi waliin hojjechuukeenyaan kessumaa hawaasni naannoo horsiisee bulaan jiru iddodhaa iddootti ijaa naanna’uuteeknooloojiitti carraa tajaajila baankii argachuu isaanii ol guddisa. jachuudhaanis ibsaniiru.
Wayita ammaa fayyadamtonniSahaayiPeyii miliyoona tokko ta’an yammu jiraatan guyyaatti sochiin daldalaa maallaqqa miliyoona 920 akka taasifamu ibsameera.
Total views : 7512509